Ukwephulwa okuvame kakhulu emsebenzini we-veins nemithambo yegazi kuhlotshaniswa nokuvinjelwa kwabo. Lesi simo siholela ekusungulweni kwe-thrombus, noma i-embromus, lapho i-thromboembolism iqala khona. Kuyini? Inqubo ye-pathological lapho umthambo we-pulmonary uvinjelwe khona. I-Thrombi ivame ukubunjwa emjikelezweni omkhulu wokuhambisa, ku I-ventricle yangempela noma i-atrium. Ngezinye izikhathi lesi simo asinayo imiphumela embi, kanti ngezinye izikhathi konke kungaphelela emphumela wokubulala.
Kungani i-thromboembolism ikhula?
Izizathu zokwakhiwa kwe-thrombi zihlobene ngqo nokuphulwa kwenqubo ye-fibrinolysis. Izakhiwo ze-embolisms zakhiwe ezindongeni zemithambo yegazi, ekugcineni zikhuphuke futhi zihlukane, ziqala indlela yazo emzimbeni, kungenxa yokuthi i-thromboembolism ingenzeka. Yiziphi izici? Eqinisweni, kungumcibisholo wegazi kuphela. Lapho sifinyelela esitsheni esincane, isembozo siyihlanganisa. Ukugqugquzela le nqubo kungaba izifo ezihlukahlukene, isibonelo i-thrombophlebitis yemilenze, i-infarction ye-myocardial, i-rheumatism, isifo somfutho wegazi ophezulu, ukukhuluphala ngokweqile, ukuqina kwe-atherosclerosis, i-endocarditis yokuphefumula. Ngisho nokuphumula kombhede kungaba yingozi. Kubalulekile ukuthi isiguli esiphendukayo sithathe izidakamizwa ze-fibrinolytic futhi senze izivocavoca zokwelapha ezinyaweni. Ukwakha i-thrombus, kufanele kube nezici ezintathu: umonakalo odongeni lwe-vascular, ukunciphisa ukugeleza kwegazi nokwanda kwegazi. Uma lezi zimo zihlanganisiwe, Iba.
Lesi sifo sibonakala kanjani?
Ukuze kuhlolwe, izinga lokuthuthukiswa kokulimala komzimba, ukuphazamiseka okuhambisana nalomqulu wezitsha ezithintekile, kanye nesimo jikelele sesiguli kubalulekile. Ngokuvamile, isithombe sesitholampilo asikho izimpawu ezithile ezibonakalayo, ngakho-ke kuvame ukukwazi ukubona inkinga kuphela ngesikhathi esibucayi. Noma kunjalo, kunezinye izimpawu. Isibonelo, izifo zenhliziyo, ezibonisa ukuthi i-thromboembolism yenzeke. Kuyini? Njengomthetho, lokhu kuyisimo esingenasisindo se-vascular nge- drops enamandla ekucindezeni kwegazi, ubuhlungu e-sternum, enikeza ingalo engakwesokunxele nehlombe, i-lung edema, i-tachycardia, i-hypoxia ye-cerebral, i-edema yobuchopho ehambisana nosizi, ukukhala ezindlebeni, ukuxubana, i-coma. Kunezibonakaliso zamapulmonary-pleural ezibonisa ukuthi isiguli sinesifo sengculaza. Kuyini? Lokhu kuhluleka okunamandla okuphefumula, ukuqhuma i-bronchi ne-infarction yamaphaphu, kuhambisane nokuphefumula, ukukhwehlela ngegazi nobuhlungu ku-sternum. Ngombukiso we-febrile wokuvimba kwe-artery, ukuvuvukala kuvela emaphashini, futhi ukuvuvukala kwesisu kwamasaka esiqindi, I-quadrant engenhla engenhla. Kunoma yikuphi, ukuhlolwa esibhedlela kwasekuqaleni kuyadingeka uma unesibindi sokuthi i-thromboembolism ithuthukile.
Isiguli sidinga izinyathelo zokuvuselela ukukhipha usongo empilweni. Ukubuyiselwa kwegazi lokujikeleza kwegazi, ukujwayelekile kwegazi lokugeleza kwegazi kuyenziwa, ukuvimbela ukucindezeleka komfutho wegazi kuyadingeka. Kungenzeka ukubeka ukwelashwa kwe-oksijeni kanye nezidakamizwa ze-fibrinolytic, lapho kukhona ukuvuvukala, ukwelashwa kwama-antibiotic kwenziwa. Zonke izimpawu zivinjelwa amadivayisi wezokwelapha athuthukisiwe. Ngaphandle kokubhedlela, isiguli asiphathwa.
Iyini ingozi yokutheleleka kwe-enterovirus kubantu abadala?